I-BLUE APATITE INTSINGISELO + YEZIBONELELO ZOKUPHILISA - INANI
Intsingiselo yeBlue Apetite + Iipropathi zokuphilisa
Ngaba ukulungele ukwamkela ixesha elingakumbi ebomini bakho? Nokuba awusebenzi kwaye ujonge okulandelayo, okanye unokusebenzisa i-oomph encinci, sukujonga ngakumbi kunokongeza i-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka kwingqokelela yakho yekristale. Eyona ndawo ixhaphakileyo efumaneka kwi-cobalt ekhanyayo kwimibala eluhlaza okwesibhakabhaka, i-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka inokuthengwa ngwevu, luhlaza, mdaka, kunye negolide / tyheli. AmaGrike ngokufanelekileyo athi eli gama lithetha intsingiselo, ukukhohlisa, kuba yayihlala ixutywe kunye neentlobo zeBeryl nePeridot. Kuba izimbiwa zenziwe ngecalcium phosphate, kukholelwa ukuba iyanceda ekuphiliseni nasekomelezeni amathambo, amazinyo, ukuvuselelwa kweeseli kunye nezicubu zomzimba. Eli litye lokungcangcazela liphezulu linoluhlu olumangalisayo lweenzuzo ze-metaphysical, kubandakanya ukudala amandla okuzola, kodwa aphakanyisayo, anceda ekucaceni kwengqondo, kunye namandla okusombulula iingxaki kunye nokufezekisa nantoni na obeka kuyo ingqondo.
Isetyenziselwe ikakhulu umqala kunye ne-chakras yamehlo yesithathu, i-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka isetyenzisiwe njengelitye elinamandla lokuphilisa ukunceda ekucoceni iibhloko ezinamandla kwii-chakras, kwi-meridians, nakwi-bio-field (aka aura) -ngokukodwa kwinqanaba lomzimba wengqondo. Isebenza ukukhulula amandla amileyo oxinzelelo kunye neemeko zovakalelo: uloyiko lokuthetha esidlangalaleni lukhuthaza ukuhlala kamnandi kwiimeko zentlalo apho unxibelelwano olucacileyo luyafuneka khona. I-apatite eblue kuye kwathiwa ikhuphe uxinzelelo lweemvakalelo, kunye neenkumbulo ezibuhlungu ezivela kwixesha lethu elidlulileyo. Iphula amandla afaka isandla ekudinweni kwengqondo ngokukhulisa ukungcangcazela kwakho ukuze uzive ulungile.
Abo basebenze nge-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka bathe bakhuthaza ukukhuthazwa ukusombulula iingxaki kunye nokwandisa intetho yoyilo. Ukuba ujonge ukubonisa amaphupha akho kunye neenjongo, ukusebenza ngale kristale kuya kukhuthaza ukukhuthazeka kunye namandla akho okwenza izinto! Kuthiwa ukwandisa ingqondo, ekuvumela ukuba uvuleleke kwimibono emitsha kunye nemibono, ukwandisa ukugcinwa kunye nokuqonda kolwazi, okwenza ilitye elikhulu kubafundi, ootitshala nakwabo basebenza kwishishini. Ukusebenza nge-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka kukholelwa ukuba kusebenze izipho ze-psychic kunye ne-clairvoyant, ukutyhila imiyalezo ecacileyo ngemibono kwindawo yokucamngca okanye yamaphupha amnandi, anceda ukuveza elona nqanaba liphezulu lenyaniso ngokwembono yengqondo kaThixo, ityhila ukuqhubela phambili komphefumlo wakho ebomini kwiiRekhodi zeAkashic, kwaye isusa ukudideka ngokubhekisele kubomi bakho nasemphefumlweni kwesi sizalo, kwaye iphakamisa amandla eKundalini kwisiseko somqolo. Ukugcina isiqwenga se-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka kwindawo yakho yomqamelo, ecaleni kwebhedi yakho, kunxitywe ubucwebe, okanye kubanjelwe ukucamngca zezona zinto zisetyenziswayo kweli litye. Ukuyisebenzisa rhoqo kuya kuzisa unxibelelwano olunzulu kwiiSelves zethu eziPhakamileyo, iingelosi ezilondolozayo, iinkosi ezinyukayo, kunye nezinye izidalwa ezikhanyayo zasemazulwini, kubandakanya nomoya woMhlaba, owaziwa njengeGaia, kunye nezithixo eziluhlaza zangaphandle ezingaphandle njengothixo wamaHindu uKrishna.
Kwinqanaba lokomoya, i-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka isebenza ukulungelelanisa amandla eempawu zethu zobudoda kunye nezobufazi, kungenjalo kwaziwa njengeYin kunye neYang amandla. Ngaphandle kwesini sethu, sonke sineempawu zobudoda nezobufazi kubuntu bethu. Le kristale isebenza ngokukhethekileyo ukucima iibhloksi kunye namandla aphazamisa ukuvumelana phakathi kweendlela ezahlukeneyo ze-aura, ii-chakras, ii-meridians, kunye nenqanaba lomzimba kunye namalungu. I-apatite eblue kukholelwa ukuba iyakha kwaye ilungisa iiseli, kodwa kunye namadlala, intlala, kunye nantoni na enento yokwenza nezicubu zomzimba; ukulungiswa ngokudibeneyo, ukunciphisa isifo samathambo, kunye nokusebenza kwemoto. Kuthiwa kuluncedo olukhulu ukunciphisa umzimba ngokunganciphisi ukutya kwakho kuphela kodwa nokwenza isebenze imetabolism ekhawulezayo! Olunye usetyenziso lokuphilisa ngokwenyama lubandakanya ukuphucula ukubonwa kwamehlo kunye nokubonelela ngesiqabu seentloko.
Njengomphathi oyintloko, ndincoma kakhulu ukuba uthenge isiqwenga se-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka ngokwakho okanye kumhlobo ojonge ukuqhubela phambili kwindlela yabo ebomini- phakathi kobhubhane kunye neCovid-19 kunye nemeko yangoku yehlabathi- sonke Sebenzisa amandla amnandi, athandekayo, nawokuthomalalisa avela kwi-apatite eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kutheni uCeline dion ebhityile
Inqaku elibalulekileyo kubahlobo bam abatsha ekusebenzeni ngekristali: ngenxa yentshukumo yayo ephezulu, ukusebenzisa i-apatite eblue kunokubangela ukuba nesiyezi okanye i-vertigo ukuba awuqhelanga ukusebenza ngamandla okunyanga ikristale. Kungcono ukusebenzisa eli litye ngokunyusa ukuthintela iziphumo ezinjalo, kwaye ke, sebenzisa esona sigwebo sakho sithuba kunye nokusetyenziswa rhoqo. Ukutsiba ekusebenziseni amatye okushukuma okuphezulu kunokuba yinto engqonge abanye- ke kungcono ukuba ube nekristale ekufuphi enokunika amandla azinzileyo, anamandla, njengeHematite, i-Onyx, i-Obsidian, iSmartz Quartz, okanye iBlack Tourmaline.
Ithetha ntoni ingelosi engu-777
Ingelosi inombolo 999
Ithetha ntoni i-333 ngokwasemoyeni